Hot Laydhka Wire galvanized - Shiinaha Hebei Samsung Birta Wire mesh
Wire Hot Laydhka galvanized, sidoo kale loo yaqaan kulul-maquufin silig bir ah zinc-plated, ama silig bir ah galvanized. Hot Laydhka Waxyaabaha Wire galvanized: carbon processing steel hooseeyo by barbaro, kulul-maquufin daahan zinc. Features Hot Laydhka galvanized Wire: 1. dabacsanaan u fiican iyo debecsanaanta 2. isticmaalka habboon: qaadashada Net, loogu fuuli jiray, baling, laalaadeen iyo wixii la mid ah. Hot Laydhka Processing Wire galvanized: Gal soo saarta oo tayo fiican leh kulul-maquufin galvanized silig bir ah ka doorashada silig steel carbon hooseeyo, iyada oo loo marayo geedi socodka of ...
FOB Price: US $ 450 - 1,050 / Ton
Min.Order Tirada: 10 ton Ton / metrik ton
Supply Kartida: 65 Ton / metrik halkii Day
Hot Laydhka Wire galvanized , sidoo kale loo yaqaan kulul-maquufin silig bir ah zinc-plated, ama silig bir ah galvanized.
Features Hot Laydhka galvanized Wire:
1. dabacsanaan u fiican iyo debecsanaanta
2. isticmaalka habboon: qaadashada Net, loogu fuuli jiray, baling, laalaadeen iyo wixii la mid ah.
Hot Laydhka Processing Wire galvanized:
Gal soo saarta oo tayo fiican leh kulul-maquufin galvanized silig bir ah ka doorashada silig steel carbon hooseeyo, iyada oo loo marayo geedi socodka of sawir silig, dhaqidda acid iyo miridhku ka saareen, annealing iyo-gabax.
Hot Laydhka Codsiyada Wire galvanized:
Hot-maquufin galvanized silig waa mid aad u dabacsan oo jilicsan, si ballaadhan loo adeegsado dhismaha, farsamada gacanta, mesh silig leh tolmo wanaagsan, express mesh jidka dayrka, baakado alaabta iyo isticmaalka kale ee maalin walba.
Hot Laydhka faahfaahinta Wire galvanized:
In mm System ton
23 # 34 # sidoo kale diyaar u ah silig galvanized birta.
Previous: PVC Wire dahaarka
Next: Korontada Wire galvanized
PVC Wire dahaarka
Wire Annealed Black